မဒေါင်းလုပ် PUBG Pixel APK မအဘို့ Android
မဒေါင်းလုပ် PUBG Pixel
မအခမဲ့ မဒေါင်းလုပ် မအဘို့ Android (42.00 MB)
မဒေါင်းလုပ် PUBG Pixel,
လူတိုင်းခံစားရန် Pixelated Battle Royale ဂိမ်း။ နောက်ထပ်ကစားသမားများနှင့် 3-5 မိနစ်ပွဲများနှင့်အတူ၎င်းသည်ပျော်စရာဖြစ်လာသည်။ ဧည့်ခန်းတွင် စောင့်ဆိုင်းမနေဘဲ သွားလာရန် ရှုပ်ထွေးသော မီနူးများ မရှိပါ။ ကစားပါ၊ မိုးပျံခုန်ပါ၊ လုယက်ပြီး ရှင်သန်ရန် ကြိုးစားပါ။
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှ ကစားသမားများနှင့် ယှဉ်ပြိုင်သည့် တစ်ဦးတည်းသော ကစားသမားများ တိုက်ပွဲတွင် အချိန်နှင့်တပြေးညီ လျင်မြန်စွာ ပါဝင်ပါ။ ဂိမ်းမြေပုံကြီးကြီးကို ရှာဖွေရန် သင်ရွေးချယ်ထားသော တည်နေရာတွင် သင့်လေထီးဆင်းသက်ခြင်းကို ထိန်းချုပ်ပါ။ ထို့နောက် ဘေးပတ်ပတ်လည်ရှိ ပစ္စည်း ဒါဇင်ပေါင်းများစွာကို စုဆောင်းပြီး သင်၏ရန်သူများကို စုဆောင်းပါ။ ပွဲများတွင် အလွန်အရေးကြီးသော အားသာချက်များရရှိရန် airdrops များကိုလည်း စစ်ဆေးပါ။
မဒေါင်းလုပ် PUBG Mobile Lite
PUBG Lite ကို download လုပ်ခြင်းဖြင့်ဖုန်းအားလုံးအတွက်ပြင်ဆင်ထားသော PUBG ဗားရှင်းသို့သင်ချက်ချင်းဝင်ရောက်နိုင်သည်။ PUBG Mobile Lite (APK) သည် Android ပလက်ဖောင်းပေါ်တွင် download...
PUBG ကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲပါ PUBG သည်စစ်ပွဲဆင်နွှဲသည့်ဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးသင် Windows ကွန်ပြူတာနှင့်မိုဘိုင်းတွင်ဒေါင်းလုပ် လုပ်၍ ကစားနိုင်သည်။ PUBG...
အကန့်အသတ်ရှိသော လက်နက်များနှင့် ကိရိယာများသည် ဤအရင်းအမြစ်များကို ထိန်းချုပ်ရန်အတွက် တိုက်ပွဲဝင်ခြင်းကို ဆိုလိုသည်။ ကစားသမားများသည်လည်း အချိန်ကို ဆန့်ကျင်လျက်၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ စစ်မြေပြင်က သေးသထက် သေးလာလို့။
PUBG Pixel မသတ်မှတ်ချက်များ
မဖိုင်အရွယ်အစား: 42.00 MB
မိုဘိုင်းပလက်ဖောင်း၏အောင်မြင်သောဂိမ်း developer များအနက်မှတစ် ဦး ဖြစ်သော Sinma Games...
Fruit Master သည်ဂိမ်းကစားခြင်းကိုမိုဘိုင်းပလက်ဖောင်းပေါ်တွင်အများဆုံး download လုပ်ပြီးကစားသော...
သဲကန္တာရအလယ်၌အပြေးပြိုင်ပွဲများကိုလက်ခံကျင်းပသော Stunt Car Challenge 3...
Writer Simulator 2...
သငျသညျကွဲပြားခြားနားသောသင်္ဘောများသုံးပြီးစွန့်စားပင်လယ်ခရီးကိုသွားနိုင်သည့် Real Cruise Ship...
iGun Pro APK သည် မိုဘိုင်းလ်တွင် ကစားအများဆုံး သေနတ်ဂိမ်းများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်...
Fun Run 3: Arena သည် မိုဘိုင်းပလက်ဖောင်းကစားသူများအတွက် အခမဲ့ပေးဆောင်ထားသော arcade...
အာကာသထဲတွင် တိုက်ပွဲဝင်ရန် အသင့်ပြင်ထားပါ။ ၎င်း၏ ကြွယ်ဝသော အကြောင်းအရာများဖြင့် အာကာသ၏...
Galaxy War သည် Raptor: Call of the Shadows ကို အမှတ်ရစေသော အလွန်ပျော်စရာကောင်းသည့်...
IRBoost Gate ပရိုဂရမ်သည် သင့်ကွန်ပြူတာ၏အင်တာနက်ချိတ်ဆက်မှုအမြန်နှုန်းကို ကျေနပ်မှုမရှိပါက...
Happy Color သည် Android လည်ပတ်မှုစနစ်ဖြင့် သင့်မိုဘိုင်းစက်ပစ္စည်းများတွင် သင်ကစားနိုင်သည့်...
လူတိုင်းခံစားရန် Pixelated Battle Royale ဂိမ်း။ နောက်ထပ်ကစားသမားများနှင့် 3-5...
The Archers2APK Android ဂိမ်းတွင် stickman မှ လေးပစ်သူများကို သင် စီမံခန့်ခွဲပါသည်။ အကယ်၍ သင်သည်...
Ball Blast APK သည် အမြောက်သေနတ်ဖြင့် ကျောက်တုံးများကို ရိုက်သည့် တုံ့ပြန်မှုအခြေခံ Android...
Shark Game APK Android ဂိမ်း Ubisoft ၏ survival action အမျိုးအစားတွင် ထုတ်လုပ်ထားသည်။ သင်သည်...
Fubo Runner သည် Fenerbahçe ၏ မိုဘိုင်းဂိမ်းများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ Fubo Rolls သည် Fener Legend...
Hoop Stars သည် Android ပလပ်ဖောင်းပေါ်တွင် သင်ကစားနိုင်သော ကောင်းမွန်သော...
Hyper Jobs သည် Android လည်ပတ်မှုစနစ်ဖြင့် သင့်မိုဘိုင်းစက်ပစ္စည်းများတွင် သင်ကစားနိုင်သည့်...